Kartooniistayaasha shabakadda | Martech Zone
Khamiista, Sebtember 7, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Caadi ahaan sidaan ma sameeyo. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira munaasabado mararka qaar ah oo aan dareemayo inaan igu qasbay inaan dabino dabinkeyga weyn. (Asxaabteyda iyo shaqaalahaygu waxay kuu sheegi doonaan inay dhacdo wax ka badan inta aan jeclaan lahaa inaan qirto). Waa tan goes
Xalay markii aan ku labistay goobtayda oo lagu daray Blaugh, aad ayaan uga nastay helitaankii. Xaqiiqdii waxaan ku helay Blaugh anigoo samaynaya xoogaa Googling ah oo loogu talagalay kartoonnada baloogyada. Boggeygu wuxuu u baahday xoogaa kaftan ah… haa, oo ka baxsan xikmaddayda… sidaa darteed waxaan u maleeyay kartoon is-beddelay oo badiyaa beddelkiisu fiicnaan lahaa.
Bal qiyaas argagaxa markii natiijooyinkeyga Google ay la yimaadeen tan:
Waxaan dulmar yar ku dhigi lahaa balooggeyga, laakiin waxaan u maleynayaa in meel ka mid ah sawirka ay tahay xuquuq guurinta. Fadlan booqo… ugu yaraan si aad ula kulanto Smaugy, Xafiiska Eel. Tani ma sameynayo
Mar dambe odhan maayo. Hadda waan seexan doonaa. Habeen wanaagsan
Internet Explorer: Wax ka beddelka Sawirada ku jira Web-ku-saleysan HTML Editor
Isla weynaan shirkadeed
Sep 10, 2006 at 9: 50 AM
Xoog Badni waa hubaal in la jecel yahay, in kasta oo ay waajib igu tahay in aan qirto in aanan in muddo ah goobta tegin!
Sep 10, 2006 at 5: 07 PM
Ma hubo waxa murugada leh:
a) Qof u malaynaya inay dadku rabaan kartoonno sidaas oo kale ah
b) Qof dhab ahaan adeegsanaya adeegyadooda?
(Waxay ganacsi ku jireen ilaa 2005…)